'I-SAILOR MOON' IYA KUSASAZWA SIMAHLA KWI-YOUTUBE-EJAPAN KUPHELA - ANIME
Ngaphambi kokutsha INyanga yoLwandle kuphuma eJapan, abanye abalandeli be-iconic yemilingo yamantombazana aza kuba nonyango olumnandi ngokufikelela kumaxesha amathathu okuqala kuthotho lwee-90s simahla kwiYouTube. NgokukaCrunchyroll, iqonga liza kukhupha iziqendu ezili-10 ngeveki ukuqala ngolwesiHlanu, nge-24 ka-Epreli, de kube zonke iziqendu ezili-127 zenziwe zifumaneke phambi kokuphela kukaJulayi. Iindaba ezibuhlungu, oku kwenzeka eJapan kuphela. Cue silila sisuka eBrooklyn.
Esi sizathu sokuba bayeke kwisizini yesithathu kukuba izahlulo ezibini ezizayo INyanga yoLwandle ifilimu Umgcini woLwandle oMhle ngokuGqibeleleyo kwiMovie kulindeleke ukuba ikhutshwe eJapan nge-11 kaSeptemba. Umboniso bhanyabhanya osekwe kumgca webali ovela kwi-manga yoqobo eyaba lixesha lesine le-anime. Le iya kuba yindlela yabantu yokufumana uthotho kwaye baphinde baqwalasele imicimbi ekhokelela kwisizini yesine.
U-sofia inkosazana yokuqala
Kula bethu abekho eJapan, uthotho luyasasaza kwiHulu ke ukuba ufuna ukufumana iMoonie yakho, leyo yenye yeendlela zokwenza. Ukuba nayo simahla kwiqonga elifana ne-YouTube kubo bonke ukufikelela kuyo bekuya kuba kuhle, kodwa yeha.
Iimfazwe zeenkwenkwezi Rey Mary Sue
(nge I-Verge , umfanekiso: I-Toei yoopopayi)
Apha zi amanye amaqhawe ngubani okhathalele okusingqongileyo ngoMhla woMhlaba, kuba ayisiyiyo yonke ityhefu Ivy kunye neThanos. (nge LEYA )
Ngaphandle komxholo wakhe onengxaki, uJ. Rowling ’s impembelelo iyaqhubeka Njengeqela leenzululwazi e-India igama elitsha lendidi yamarhamba aluhlaza iTrimeresurus salazar emva komsunguli weentsomi weNdlu uSlytherin. Ubuncinci njengoSlytherin, ndiyayixabisa loo nto. (nge Iposi likaHuff )
Njengomntu ohamba phakathi kweedrama zexesha kunye ne-anime, le comic malunga Ukutsalwa kweedrama zexesha Ngexesha lokuvalelwa ndithethile nam. (nge ENew Yorker )
Ukuwonga uSUKU LOMHLABA, kwaye ngokuhambelana ne @ProbablyPaigey 'S (i-FPC North Carolina Ambassador's) BDAY ye-18…. https://t.co/SSqu0fXffV # UmhlabaDay2020 # UmhlabaDay50 #FootPrintUmanyano pic.twitter.com/EI8u1ITIMA
-Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) Epreli 22, 2020
Umlingisi uJameela Jamil uthetha ngaye ubukho obunempikiswano kwi-Intanethi . (nge UMgcini )
Inkqubo ye- amaxabiso itheniphu phakathi Ukuwela izilwanyana: IiHorizon ezintsha malunga nokujika okumnyama. (nge Ipholigoni )
Ubone ntoni namhlanje?
ukuwa kwe-4 yindoda vs ibhinqa
ukukhanya kwe-xfire ibhayisekile ukukhanya kokhuseleko
le yindlela esiphumelela ngayo
Intombazana endala yeelenti iskipa cookies
amaqhawe omlawuli wecosplay holly
Isivakalisi esinonobumba bonke
I-gal gadot efundwayo ithetha iifayile